Indonesia in Focus: Ụmụ mmadụ enwekwaghị harmonization okike.
Ụmụ mmadụ enwekwaghị harmonization okike.
The na-agba ịnyịnya na-okokụre (378) (Part narị atọ na iri asaa na asatọ), Depok, West Java, Indonesia, September 30, 2015, 3:18 pm). N'etiti 1960 na 1970 ịrịba obodo, na obodo upstream nke osimiri ịrịba wayn ma ka na-wilderness. Ọ bụghị ọtụtụ bi, ma Obodo (Dayak ube agha) bugis na migrants si Java. Iru obodo ndị dị n'akụkụ osimiri ma si obodo nke New ulu, Balikpapan na-emekarị ndị na-eji obere ụgbọ mmiri (na a naa), na mgbe osimiri ọzọ ngwa ngwa okwukwo (n'ihi mmiri ozuzo) Mgbe ahụ, were ụbọchị dị nnọọ rutere obodo nta upstream nke osimiri ahụ, ugbu a obodo ama ọnụ na obodo Balikpapan, na ohere ụzọ ama mfe, ma na a anọ wheel ụgbọala na ọgba tum tum. Obodo ndị bi na predominantly Dayak ube agha bufere ala-anọ n'ime obodo upstream na upstream ịrịba wayn. Ndị bi na ndụ si ugbo ubi, ma, n'ihi ala ọnọdụ na ndị ọrụ ugbo na-emekarị osikapa ugbo na naanị ike egbute otu ugboro n'afọ. Ma na-emekarị na mgbakwunye na-eto eto osikapa, ndị ọrụ ugbo na-emekarị intercrop ubi na akwụkwọ nri, dị ka kukumba, pọọpọ, ọka na akpu. Ya mere, ọ bụrụ na ọkọnọ osikapa nri ebuka depleted, ndị ọrụ ugbo oriri na-ezuru ebuka akpu, maize ma ọ bụ ọka owuwe ihe ubi mgbe enwetara site na ọhịa, Na mgbakwunye na mkpụrụ osisi dị ka pọọpọ na tomato na-kụrụ, oké ọhịa ka nwere ọtụtụ durian na rambutan na tan (duku ọhịa). Mgbe azụ na ndị ọzọ na akụkụ efere na-emekarị bụ ndị Alakụba ichu nta mgbada (mgbada) Dayak mmadụ na-akpọ brackish, mgbe maka mpaghara bi Kaharingan Hindu, na Christian animsme ha na ichu nta mgbada na pigs. Bi adịghị na-emekarị ichu nta eke sara quantities na nghọta na a osisi alaka n'akụkụ osimiri. Ọ bụ ya mere mgbe ọ na-ọbụna ma ọ bụrụ n'akụkụ osimiri e nwere ọtụtụ eke, bi na-eji nwayọọ kwọchara ụgbọ mmiri nke si downstream ka upstream na-enweghị nkwụsị, ọ e kwuru ọtụtụ e gburu a Kechie ma ọ bụ adọwa eke bụ dinta (agha) na-emekarị gbagburu isi nke agwọ , Mgbe freshwater azụ dị nnọọ ndụ na osimiri ọbụna anya pụrụ ịhụ, n'ihi na osimiri doro anya. Bi-emekarị mgbe rata azụ, ma ọ site ịtụkwasị a achara azụ ọnyà (anyị na-akpọ sizinin). Ndị ọrụ ugbo mgbe ọ bụ tupu akuku osikapa, ejikari emeghe ugbo ala site na-ere ọkụ na oke ohia. N'ihi na ọ bụrụ ọrụ ugbo doro anya ala site nhọrọ osisi (disposable knives / Ogwara Chanzy ndu) ka abụọ hectare ala ubi na-ewe ọtụtụ ọnwa ọhụrụ kere abụọ hectare ugbo ala, ma mgbe ọkụ, naanị n'ime a oge nke a izu. Otú ọ dị, ndị obodo ọrụ ubi ka ugbua ahụmahụ, ha nwere ike ọkụ nke oké ọhịa na-ebe ahụ measurable, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji abụọ hectare, mgbe ọkụ naanị abụọ hectare, ha nwere ụzọ na oké ọhịa ọkụ adịghị agbasa na-agbasa ebe nile. Ya mere, bara uru anụ ụlọ ndụ ndị ọrụ ugbo, ọbụna a ube agha Dayak longhouses mmadụ bi n'etiti 3 5 isi nke ezinụlọ na otu ụlọ. Ha kwa ụbọchị nri na osikapa (osikapa / osikapa) tinyere azu, anu (jerky) mgbada, na a dịgasị iche iche nke akwụkwọ nri, dị ka akpu epupụta na kukumba. Na ha ubi onwe ha, na-eto eto ofụri isua, nwetụ n'etiti owuwe ihe ubi nke osikapa, ọka, akpu na sago, ọ bụ nnọọ otu lauknya sepnjang afọ freshwater azụ ma ọ bụ anụ jerky mgbada (mgbada) ma ọ bụ anụ ezi (Dayak Christian / Hindu Kaharingan) ọtụtụ Dayak Christian okpukpe ma ọ bụ Hindu Kaharingan, ma karịsịa, Dayak ube agha, n'ihi na ọtụtụ na-ebi na ala gbara osimiri okirikiri district ube agha, na-emekarị na n'ụsọ oké osimiri na-ukwuu metụtara na-akwagharị akwagharị nke si bugis / Bajau (Sulawesi) ndị Muslim, ọtụtụ Dayak ube agha-agbaso ozizi okpukpe nke bugis / Bajau nke a. N'ihi na isi nri (staples) bi bụ enwetara site na ubi na bụ enwetara site na oke ohia (sago), mgbe ahụ ndị mmadụ na-eme adịghị ọgbaghara gburugburu na onu oriri na a ife nke layoffs (layoffs) aga na obodo bi. Radio telivishọn karịsịa, mgbe ọ bụghị n'ebe ahụ, ka kpam kpam enweghị ọmụma si n'èzí ụwa / Dịghị nsogbu oge Presidential ntuli aka mgbasa ozi, Gunernur, mayors na regents, nakwa na e nweghị obodo ntuli aka, na ọ dịbeghị onye e họpụtara isi nke obodo, nanị isi aha maka isi nke obodo / obodo. Sịkwa mgbe ọ bụghị niile bi nwere a mba kaadị na-akọwa (KTP). Ọtụtụ Dayak ghọrọ ekpe Christianity, n'ihi na mgbe ọ bụ ọtụtụ pastọ / oku site Netherlands na ọtụtụ banyere n'ọhịa ọbụna ọtụtụ guzosie ike a na chọọchị nọ n'ọhịa. Ndụ nke ndị obodo ha kwekọrọ n'uche ọdịdị, n'ihi na site na okike ha nwere ike-aghọrọ mkpụrụ results adigide. Na 1970, ọ bụ ezie na nna m bụ onye agha, ma kpebiri ịkwaga n'ụlọ si abanye agha sentosa II Balikpapan, site ewu ha onwe ha n'ụlọ na osimiri na Kampung Baru Central, Balikpapan, kwere nghọta anyị sekelurga ugbua nwere ụmụnne isii ndị mmadụ (ampai ezumike nká, nna m nwere ụmụ ndị ikom ise, ise inyom) Ọ bụrụ na gbakọọ na ime ọpụpụ ugboro atọ, mgbe ahụ, nne m mụrụ (nwere ụmụ 13). Ya mere nna m iwuru nnukwu ogbo, nke n'okpuru oké osimiri n'okpuru ụlọ bụ mgbe tide). Ya mere WC / mposi / latrine ozugbo olulu n'ime oké osimiri. Kwere nghọta mgbe e nweghị ezinụlọ atụmatụ (KB), otú ụmụaka nile nwere ike jupụtara osikapa ekenye si ọrụ. N'oge a anyị nwata ọnụ bi n'ógbè na-emefu oge ntụrụndụ na berenamg na kwọchara ụgbọ a obere ụgbọ mmiri na osimiri nri n'azụ ụlọ. Anyị Kdang azu, na kpọọ crabs nwere ọtụtụ na azụ nke ụlọ ahụ. Mgbe niile anyị na enyi pedaling ụgbọ mmiri gburugburu estuaries Wayne na osimiri ịrịba na obodo ohuru ọgwụgwụ, a anyị menjaing crabs na a dịgasị iche iche nke umu, gụnyere oporo na ejula mangrove (eju mangrove) Nke ahụ bụ dị ọtụtụ ebe nke dị ná mpụga mangrove ọhịa mgbe ọ ka chọọ tinyere n'ụsọ oké osimiri nke Gulf nke Balikpapan. Na 1990 mgbe anyị bịara azụ ebe a (mgbe ezinụlọ anyị kwagara Jakarta na n'oge 1973) dị nnọọ ileta ezinụlọ ikwu bụ ndị ka bi na London, anyị hụrụ n'ụsọ oké osimiri nke Balikpapan mgbe hụrụ n'efu plastic n'efu na ndị ọzọ karịa ikwafu. Suli kwuru akụ azụ n'ógbè ga-ahụ ya ọzọ ọtụtụ ụdị azụ, nshịkọ, oporo (oporo) na ejula na ala gbara osimiri okirikiri mangrove Balikpapan, ndị ọzọ karịa ebibi mangrove, ala gbara osimiri okirikiri osimiri bụ tercenar dị iche iche mkpofu. Anyị na-enweghị ike ịhụ ọzọ orangutans Daulu ukwuu nghọta na osisi tinyere si downstream ka upstream, gụnyere eke kemgbe siri ike ịchọta. Orang-utan anyị ka pụrụ ịchọta n'agha orang utan n'ime osimiri wayn nọgidere na-enwe ọchịchị Òtù nke administers na Orang utan. Ugbu a n'àgwàetiti Borneo abụkwaghị predominantly Mmanu wilderness, ugbu a htannya ọtụtụ ọkụ ga-anọchi ọrụ mmanụ nkwụ n'ugbo, na eruba nke osimiri mmiri e shrinking, n'ihi na ọrụ osisi banye mmiri ozuzo mmiri tupu ya aga n'ime Osimiri Yufretis, malitere akwụsị, Anyaukwu mmadụ aku na uba na bụ na-emeghe ala oru ubi mmanụ site na-ere ọkụ ọhịa, n'ihi na Indonesia na-ugbu a gụnyere na mberede ọnọdụ uzu oku Indonesian ọhịa ọkụ merenụ nwere ike Samai 1997 (BBC) Forest na ala oku ke Indonesia na 1997 ruru ọtụtụ nde hectare. N'ókè na aku na uba mmetụta nke oké ọhịa na ala oku ke a ọnụ ọgụgụ nke anāchi achi na Indonesia bụ o yiri nnọọ ka dakọtara ọnụ ọgụgụ nke yiri mere na 1997, dị ka na-eme nnyocha. Site nlekota oru, Robert Ubi amata ala na ọhịa ọkụ na kụrụ Indonesia afọ a bụ oké. Ubi, a Columbia University-eme nchọpụta na-eduzi ọmụmụ ihe na Goddard Institute maka Space Studies Space Agency United States, ọbụna na-ekwere na ọnọdụ na Indonesia nwere ike ịbụ ihe siri ike ma ọ bụrụ na oké ọkọchị na-aga n'ihu dị ka a N'ihi nke El Niño onu. "The ọnọdụ Singapore na Sumatra bụ ụzọ na-eru nso n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke 1997. Ọ bụrụ na ndị amụma ihu igwe ọkọchị dịruru ogologo, ọ pụrụ-atụle na 2015 ga-e dere ka kasị njọ mere ná ndekọ," wee sị Fields e kwuru, sị site AFP News Agency. Na oge 1997-1998, na Indonesian ọchịchị na-eme atụmatụ na ego nke ala ahụ na-gụrụ ọkụ ruru 750,000 hectare. Otú ọ dị, dị iche iche gburugburu ebe obibi na ụlọ ọrụ dị ka Forum maka Environment (WALHI) na-eme atụmatụ na ọnụ ọgụgụ ruru 13 nde hectare. Mgbe ahụ na-amụ National Development Planning Agency mere ọnụ na Asia Development Bank (ADB) na-eme atụmatụ na ego nke ala emetụta ọkụ ruru 9,75 nde hectare. Banyere akụ na ụba mmetụta, ego nke atụmatụ dịgasị. Aku na uba na Environment Programme maka Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia Indonesia na-ebu amụma imerụ US $ 5 ijeri ka $ 6 ijeri dị ka a n'ihi nke ala na ọhịa ọkụ na 1997-1998. Mgbe ahụ, Bappenas na ADB ọmụmụ dere a ọnwụ nke US $ 4,861, Ẹkot Rp711 puku ijeri. Indonesia akụ na ụba losses ruru ka ọkụ na anwụrụ ọkụ na 1997 malite si ijeri $ 4 ka ijeri $ 9. Ilekota resilience Herry Purnomo, Research Institute Center maka International Forestry Research (CIFOR), nke bụkwa rụrụ ụka ala na ọhịa ọkụ afọ a iji tụnyere ihe ndekọ dị 1997. "The onu nke El Niño afọ a na ubé nta jiri ya tụnyere 1997. Otú ọ dị, resilience nke anyị n'ụwa ọzọ ngwangwa ọhịa ọkụ n'ihi na anyị na a na rere site ụlọ ọrụ na mmanụ nkwụ n'ugbo," wee sị Herrera gwara BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Herrera emeghị achị si na o na akụ na ụba mmetụta nke oké ọhịa na ala ọkụ afọ a nwere ike dakọtara na ndekọ 1997. "The Province nwere ike na Rp20 puku ijeri ọnwụ ruru ka ọkụ. Ọfọn, ugbu a, e ọ dịkarịa ala ise anāchi achi e emetụta oké, ya bụ Riau, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan, na Central Kalimantan, "wee sị Herrera. Dị ka ya, uru nke ọnwụ na-abụghị nanị gbakọọ nanị site efu osisi ọkụ. "E akwusila akụ na ụba ọrụ, nke na-emetụta ahụ ike ọha, mmiri mebiri emebi, ụgbọ njem, na ndị ọzọ," wee sị Herrera. Na N'ajụjụ ọnụ BBC Indonesia, Isi nke Data Ozi na Public Relations nke National Disaster Management Agency (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, kwuru, sị akụ na ụba mmetụta nke smog ọdachi nke mere na ọtụtụ anāchi achi na Indonesia na 2015 nwere ike gafere 20 puku ijeri. Na ọnụ ọgụgụ, ọ si, dabeere ikpeazụ afọ data. Ọ nọ na-ekpughe na losses ruru haze na 2014, gbakọọ n'elu ọnwa atọ si February ka April naanị site Riau Province ruru Rp20 puku ijeri. N'ógbè atọ setịpụrụ mberede nzaghachi asap Land na ọhịa ọkụ na-eme ka smog aghọwo a mgbe kwa afọ omume. Indonesian ọchịchị siri ọnwụ na-anabataghị aka awa abụọ mba ndị agbata obi, Singapore na Malaysia, nke ruo ọtụtụ afọ na-emetụta smog si n'oké ọhịa ọkụ na ala na Indonesia. Na a BBC N'ajụjụ ọnụ, President Joko Widodo kwuru Indonesia e na-eme ka a mgbalị siri, site gbapụ ọtụtụ puku ndị òtù ndị agha na ndị uwe ojii nakwa dị ka ọtụtụ ndị helicopters imeri. President Joko Widodo kwuru mkpa afọ atọ mezue anụ ahụ na-arụ ọrụ iji kwụsị haze. "Ọ pụtara na anyị na-na chịkọtara ha niile aka, ma nke a na-ewe oge. M na-eme atụmatụ afọ atọ na-eme anụ ahụ na-arụ ọrụ, "wee sị Jokowi gwara BBC si Karishma Vaswani. Mgbe Minista Forestry na Environment, Siti Nurbaya, kọwaa ụdị nke aka na Singapore nwere na-enye otu na nke Indonesia, na Chinook helicopters, na-enyere ndị blackout. Ma ọnụ ọgụgụ bụ nanị otu unit. N'ihi na ndị bi ileta ahụ ike center dị elu ezuru metụtara elu akụkụ okuku ume na tract ọrịa na afọ na elu n'ihe ize ndụ na-ụmụ ọhụrụ, anyị were obodo ọchịchị ụlọ n'ihi na esi kpọpụ mmadụ nile. Helda Suryani "Ọ (Singapore) na-enye onye ụgbọelu, otú gwụla ma ngasihnya 20 mbadamba ma ọ bụ 30," wee sị Siti. State nke mberede A ngụkọta nke n'ógbè atọ, ya bụ Riau, Jambi na Central Kalimantan ka amanye ọnọdụ nke mberede mgbe izu mmetọ ikuku egosi na mpaghara n'ofè ize ndụ ogbo. On Wednesday, September 30th, na egosi mmetọ a na Pekanbaru, Riau -according ka ngụkọta oge nke Meteorology, Climatology, na Geofisika- iru 450 ma ọ bụ 100 elu karịa larịị nke ize ndụ. Desi bụ nzukọ ọnọdụ, nne a otu afọ nwa ọhụrụ bụ onye na-emeso n'ụlọ ọgwụ dị na Pekanbaru, Riau, ebe na-ata ahụhụ a nkuume ọrịa. Ofufe Ọrịa e kawanye njọ site a oké haze n'elu ikpeazụ ọnwa ole na ole. "My nwa ama na ụlọ, adịghị aga ebe ọ bụla ruru ka smog. Ka nọ na kọntaktị na a nkuume ọrịa. Gịnị mere e ji ndị ọchịchị adịghị eme ihe ọ bụla? Gịnị mere echere ruo mgbe anyị na ụmụ anyị na-anwụ anwụ niile n'ihi na anwụrụ ọkụ? "Ọ sịrị. Chief Medical Officer nke City nke Pekanbaru, Drg. Helda Suryani, kwuru, sị ya emewo dị iche iche nzọụkwụ, gụnyere inye ndị ụlọ nzukọ na atọ n'ala otu ụlọ ọrụ ụlọ Mayor Pekanbaru dị ka esi kpọpụ mmadụ nile saịtị mụrụ ọhụrụ ruo ọnwa isii. The Ụlọ Nzukọ bụ ugbu a nwere site ụmụ anọ, nwanyị dị ime, na atọ nne na nna chaperones. On Wednesday (30/09), na egosi mmetọ a na Pekanbaru, Riau, dị ka ngụkọta oge nke Meteorology, Climatology, na Geophysics iru 450 ma ọ bụ 100 elu karịa larịị nke ize ndụ. "Dị ka ụmụ amaala nke a nleta ahụ ike center dị elu ezuru metụtara elu akụkụ okuku ume na tract ọrịa na afọ na elu n'ihe ize ndụ na-ụmụ ọhụrụ, anyị were obodo ọchịchị Ụlọ Nzukọ ikpopu," wee sị Helda gwara akuko na Pekanbaru, Sari Indriati. Esi kpọpụ mmadụ nile nke smog ebe e weere dị mkpa site Azisman Saad, akpa ume ọkachamara na Pekanbaru. Otú ọ dị, dị ka ya, mgbe esi kpọpụ mmadụ nile na-eme na otu mpaghara, ọ ga-abụ irè. "Ọ bụrụ na esi kpọpụ mmadụ nile na Pekanbaru kwa, m na-eche ndị na-erughị irè. N'ihi na Pekanbaru e ekpuchiworị smog, "wee sị Azisman. Ònye 'omee' n'azụ ọkụ ọhịa na ala? Ọ bụla otu eduzi ala mezie omume ga-enweta a pasent nke ya revenue. E nwere banyere 20-eme ihe nkiri abuana ke ubi ma nweta akụ na ụba uru site oké ọhịa na ala ọkụ. Kasị nke anụ ahụ nke mmasị ma rite uru na akụ na ụba-eme ihe nkiri na-esiri ndị mmanye iwu edinam. Government edinam mkpọrọ ma ọ bụ kpee ikpe ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ enyo enyo na nke na-ere ọkụ ala gaghị ezu iji gbochie ntighari smog. Eziokwu na nkwubi okwu owụt ke nnyocha na 'The Political Economy nke Land na Forest Fire' nke na-eme nchọpụta Center maka International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo. Complexity na ubi, dị ka Herrera, erukwa n'ihi na perpetrators ọhịa burners, ma na obodo na n'etiti klas na ụlọ ọrụ ahụ bụ mgbe niile na-eleta ike mmadụ, ma ndị na distrikti, nke mba, na ọbụna ruo larịị nke ASEAN. Herry Purnomo ọmụmụ chọpụtara na price nke n'ala a sụrụ site na-ere ọkụ ọ ga-ebili dị ka njikere maka kere mmanụ nkwụ. "Ọ dịghị mfe maka ndị gọvanọ ndị ga-achọ (-ere ọkụ osisi), ọ pụrụ ịbụ na nwere (n'ogige) mmanụ nkwụ, oké ọhịa ọkụ, metụtara kpọmkwem ọzọ na dị ike na ebe, otú ahụ ka regent ma ọ bụ gọvanọ adịghị mfe kwa (eme), ga-ahụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ìgwè kpakpando "Herry on BBC Indonesia, Wednesday (23/9). Ndị a eme ihe nkiri, dabere na ya nnyocha, na-arụ ọrụ dị ka ụdị nke "mpụ a haziri ahazi." E nwere ìgwè dị iche iche na-ebu si dị iche iche ihe aga-eme, dị ka ala na-ekwu, hazie ọrụ ugbo bụ ndị na-ebekasị ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ na-ere ọkụ, ruo mgbe ahịa otu na metụtara obodo isi. Ma, ọ bụghị naanị na Central larịị, na onye nwe ulo nwere ike ịbụ ndị ikwu ndị obodo, na ụlọ ọrụ si mkpara, ọrụ na district, a na-azụ ahịa, ma ọ bụ a na-ajụ-ọnụ ọgụgụ investors si Jakarta, Bogor, ma ọ bụ Surabaya. Hazie Ọ bụla otu eduzi ala mezie omume ga-enweta a pasent nke ego naanị, kama na nkezi, osisi nke ọrụ ugbo iche iche natara ndị kasị ibu òkè nke revenue, n'etiti 51% -57%, mgbe iche iche nke ọrụ ugbo-ebekasị, ọnwụ, na-ere ọkụ na-akawanye òkè nke ego n'etiti 2 % -14%. Ya nnyocha, Herry chọpụtara na price nke n'ala a sụrụ site mezie nke ubi awa na a price nke RP 8.6 nde kwa hectare. Otú ọ dị, ala na 'njikere maka akuku' ma ọ bụ e ọkụ kama ga-amụba ya price, ya bụ Rp11.2 nde kwa hectare. Mgbe ahụ afọ atọ gasịrị, mgbe ala a kụrụ njikere maka owuwe ihe ubi, growers na-ama otú ọ na-ike ere a price nke Rp40 nde kwa hectare. Image copyrightGETTY OYIYI Image caption Nwe ala ọkụ nwere ike ịbụ nke isi obodo ma ọ bụ ndị ikwu ndị obodo, district ọrụ, na-eme nnyocha. -Abawanye na uru akụ na ụba nke ala bụ ihe na-eme ka-eme ihe nkiri ndị chọrọ na-erite uru ala na ọhịa ọkụ erukwa mgbe niile. Ke adianade do, ihe nakawa etu esi nke ịzụ ma na-ere ala, ala nkwadebe bụ ibu ọrụ nke asịwo, ọ bụrụ na ọ ga-akpọ ma ọ bụ kpochara mechanically. The dị ọnụ ala karịa ndị na-eri ihicha, kechioma buyers ga-ọbụna ukwuu. N'ihi na ha tụnyere, dị ka Herrera, kwa hectare nsure-akwụ ụgwọ $ 10-20, mgbe ala na-kpochara mechanically achọ $ 200 kwa hectare. Herry ọmụmụ na 11 saịtị na anọ na distrikti na Riau, ya bụ Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai na Bengkalis iji nkewa, Gọọmenti na, na iwu-eru nso. Na Riau, e nwere 60 mmanụ nkwụ n'ugbo na ulo oru osisi n'ugbo 26. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị patrons Ụlọ ọrụ ma ọ nọ n'ógbè ahụ nke ghọrọ nwe mmanụ nkwụ n'ugbo na ebe nwere ike ịhụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị patrons na mpaghara larịị. Herrera kwuru, "Ka e were e nwere obere-ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ndị na-enwe a nnọọ ike nchebe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ na district na-emetụta Filiks-eme mkpebi mee na ndị mmanye dị n'ógbè ahụ. O nwere ike ịbụ na ha bụ ndị siri ike na-akwado nke incumbent." Player na márá larịị ma ọ bụ 'ndị oké ozu', Herrera chọpụtara, nwere ike ịbụ onye ọ bụla. "Site n'otu n'otu ọchịchị, ndị uwe ojii, ndị agha, na-eme nnyocha, nwere ike na-aka, nwere ike ruo ọtụtụ narị hectare nkwụ na nkwụ na usoro mmepe ike (eme) na-ere ọkụ na-anabata na-esote ezo oge," ka o kwuru. -Eme ihe nkiri, nke a bụ illegible ma ọ bụ a na-anwụde ụkpụrụ nke ndị mmanye iwu na-eme ugbu obibi smog. Iji chọta ya, ọ dị mkpa ka Chọpụta ebe ngwaahịa nke nkwụ mmanụ si n'ugbo na-channeled. Fuel ala Against nchọpụta ndị a, ekwuchitere Association nke Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), Tofan Mahdi, kwuru, sị e nwere 2,500 mmanụ nkwụ ụlọ ọrụ obere na n'etiti òtù, na ngụkọta e nwere nanị 635 ụlọ ọrụ ndị na bụ ndị òtù GAPKI. Haze na Riau a na-aga n'ihi na nke ikpeazụ afọ 18. "Nke ahụ otú anyị na ndị òtù m n'aka dịghị (na-ere ọkụ nke ala), n'ihi na anyị na-achịkwa na ala. Outside òtù GAPKI, anyị na-adịghị ngwá ma ọ bụ ọdịmma, ma anyị na-agba, na-akwado ihe e n'ihu site gọvanọ South Kalimantan ihe atụ, nke mere na ha (mmanụ ụlọ ọrụ obere na-ajụ mmanụ)-abụ onye otu GAPKI Iji ịchịkwa ọzọ mfe, "ka o kwuru. Otú ọ dị, Tofan-ekweta na ha nwere rigorous usoro nlekota na ala. "Ma GAPKI nwere ụkpụrụ, nwere chọrọ, ime na ndị na-achịkwa dị na ụkpụrụ na Central, Obodo na mpaghara," ka o kwuru. Ke adianade do, Riau Police eguzobewo pt Inti Langgam-adọ ụdị ụfọdụ dịkwa otu GAPKI dị ka kwo ọhịa ọkụ. Mmanye iwu mgbalị na na-nnọọ bụghị e metụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị patrons onye chebe ụlọ ọrụ ma ọ onye nwe ala ọkụ. Edi Saputra, ndị ọrụ ugbo na Ogan Ogan Ilir, South Sumatra kwuru na omume nke na-ere ọkụ ala bụ ugbua underway na obodo ruo ọtụtụ narị afọ. Ma omume na-adịghị rụrụ kwa afọ, na-emekarị nanị 5-10 afọ adanyekọta na akuku oge. "Anyị nwere ọtụtụ narị afọ ọkụ, ma gịnị mere na anyị nsogbu oge ugbu a banyere anwụrụ ọkụ, ọ pụtara, ya mere na ọ na-egosi na ọkụ a dị ike? N'ihi na ihe niile ohere ọ nyere ọrụ nke ụlọ ọrụ, n'ihi ya, ala bụ otú flammable. Land corporations na nke ahụ bụ dehydrated, ikemeke kụrụ na osikapa . Ugbu a karịa tupu, n'ebe dị anya n'ezie, ọ bụrụ na kpụchara akpụcha, e nwere tụrụ nke ọkụ, kpọmkwem na-ere ọkụ ala ahụ, "ka o kwuru. N'obodo ọhịa ọkụ: Gịnị bụ nnukwu ụlọ ọrụ 'adịghị emetụ'? 23 September 2015 Kasị ụlọ ọrụ incendiary ọhịa e sued, ma usoro bụ ajọ Environmental activists na Riau ekele maka sanctions ka ụlọ ọrụ metụtara ala na ọhịa ọkụ na Sumatra, ma ha ịjụ ihe mere a ọnụ ọgụgụ nke elu profaịlụ ụlọ ọrụ 'adịghị emetụ'. Coalition Monitors igbukpọsị oké ọhịa na Riau kwuru, ndị ọchịchị nwere ike nye a firmer sanctions-eme ka ikpe n'ụlọikpe na-achọ na ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ụgwọ ndị emetụta haze. "Inye sanctions ndị a nzọụkwụ ngwa ngwa, nnọọ ekwe. Ma, anyị ga-ahụ ma yiri nzọụkwụ ga-rụrụ na nnukwu ụlọ ọrụ na-achọpụtara na dere ọkụ na ahụmahụ ọkụ kwa afọ na ya mmejọ ebe," ka mmume mmekota Monitors mbibi Forest (Anya na oké ọhịa) nke dị n'ógbè Riau, Afdhal Mahyuddin, gwara BBC Indonesia, Heyder Affan, Wednesday (09/23) ụtụtụ. Tupu mgbe ahụ, anọ na ụlọ ọrụ Sumatra sanctioned ndị Ministry nke Environment na oké ọhịa (KLHK) metụtara ala na ọhịa ọkụ. Ụlọ ọrụ onye ikikere na-kwụsịtụrụ pt LIH (Riau), pt TPR (South Sumatra) na pt WAJ (South Sumatra), mgbe pt HSL (Riau) ikike e kagburu. Na ụlọ ọrụ ga-enye ọkụ mgbochi ngwá Na ụlọ ọrụ ga kwụsị niile arụmọrụ ke ubi na izute ya ọrụ, dị ka ọkụ mgbochi ngwá zuo ezu. Nke a saukshion dabeere ozi ọma omume pụrụ iche ọrụ ike (Satgasus) Ministry of Environment na ohia. Ha ugbu a gara 286 ọnọdụ edifọp ke Sumatra na Kalimantan. Ṅaa akwụ ụgwọ Ọzọkwa Afdhal Mahyuddin sị na ọ bụ adịghị kwa iju gị anya na ndị ọchịchị ama oyi kpọnwụrụ ikike pt LIH. "N'ihi na, na 2013 na mgbe ahụ, ha aghọwo na-enyo enyo na siburu untried," wee sị Afdal. N'otu aka ahụ, Afdal bụ bụghị kwa anya mgbe ndị ọchịchị kagburu azụmahịa ikike nke pt HSL na Riau. "Kwesịrị ịdị, dị ka ogologo-adịghị ejekwa ozi," O kwukwara. Otú ọ dị, o kwukwara,, ndị ọchịchị ga-enwe ike inye yiri sanctions, ma ọ bụ firmer, megide ndị ọzọ isi ụlọ ọrụ nke ruo ọtụtụ afọ na-eme yiri imebi. "Anyị mara, e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ohere gosiri imebi. N'ụzọ dị ịtụnanya, ha na-agaghị kagburu ma ọ bụ ga sanctioned," wee sị Afdal. Activists a, ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ na-agafe incendiary ọhịa "Echere m na ọ na-kwesịrị ihe megide nnukwu-ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ elu profaịlụ," O kwukwara. Ọ na-chọrọ, ntaramahụhụ kwesịrị ihe karịrị nanị a nkwusioru ma ọ bụ Nwepu nke ya ọrụ ikike, dị ka na-eweta ikpe a mpụ ma ọ bụ ụlọikpe obodo. "Ha na-akwụ ụgwọ ụgwọ otụk obodo ọtụtụ ebe ruru ka smog," o kwuru n'ihu. Ugbu a, ndị otu gara 286 ọnọdụ KLHK edifọp ke Sumatra na Kalimantan. Ọzọkwa, ọ si, KLHK kwuru na ụlọ ọrụ kwụsịtụrụ ikike ga mezue akụrụngwa bụ ka ga-emezu iji belata nwere maka ọkụ. Kefriza ga mmetụta Nwepu nke ikike ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-hụrụ ikpe n'ụlọikpe, ọchịchị kwuru KLHK. Ekekọrịta a ozi ọma banyere b "Gịnị bụ ọchịchị na-echere ụmụ anyị na-anwụ anwụ n'ihi na-aṅụ sịga?" N'ime ụlọ a kwadebere n'ụzọ ikuku regulator n'okpukpu nke atọ nke City Ụlọ Nzukọ Pekanbaru, Apriyani na-achọ na a ọnwa anọ-agadi na nwa-ehi soundly. The 35-afọ nwanyị bụ otu n'ime anọ ndị nne ndị dọọrọ mgbaba na mberede nwa ọhụrụ na-elekọta nyere Pekanbaru obodo ọchịchị. Nke a bụ mgbalị iji chebe nwa ọhụrụ ahụ pụọ awu uzu oku ka a N'ihi nke ala na ọhịa ọkụ na e-aga n'ihi na ọnwa. "Lee, nwa m free nke anwụrụ ọkụ. N'adịghị ka n'ụlọ," kwuru Apriyani. 'Mgbe anyị na-anọ n'ụlọ, nwa m na-coughing nọgidere. Ọ bụrụ na ebe a, na ụlọ ọrụ a na-emechi, na e nwere ikuku purifiers. Ikuku ndu na Pekanbaru dere na 1000 atụmatụ mmetọ Standard Index (PSI). Ọ bụ ezie na 100 PSI naanị na nkewa dị ka adịghị mma, ma ọ bụrụ ihe karịrị 300 a na-ewere ize ndụ. "Ụmụ ọhụrụ ndị na-ata ahụhụ kasị. Nke a otu nwa ọhụrụ mgbe niile coughing" E nweghị nwa akwa na-akwụ ụgwọ, na oxygen cylinders, ma Afriyani mengaakan ọ chọghị ịnọ ebe ahụ ruo ogologo oge. "M na-achọ ndị ọchịchị na-arụ ọrụ ike iji kpochapụ anwụrụ ọkụ, nke mere na ụmụ anyị na-eme adịghị nsogbu iku ume oge ọ bụla. N'ihi na ọ bụ ihe ọjọọ n'ihi na ahụ ike ha, nri? Dr. Helda Suryani, isi nke ngalaba ahụ ike na Pekanbaru kwuru ndo e debeere karịsịa maka ezinụlọ ndị dara ogbenye bụ ndị na-adịghị ike. "The ọgaranya nwere onwe ha ntụ oyi, na ike-ahụ onwe ha a ebe dị nchebe karị. Ezie na nke a ebe ndị ụlọ anyị na-ahụ ụbọchị ọ bụla zuru nke na-emerụ uzu oku. Mgbe a jụrụ ya mere anya mgbe ndị ọchịchị ọhụrụ inye ndo, ọ na-achị ọchị wryly. "Gịnị mere ogologo oge? Anyị na a na-ekpe ekpere maka mmiri ozuzo, na mgbe ndị agha bịara inyere, Cleaner ikuku maka ụbọchị abụọ. Ma ugbu a, ebe a ọzọ. N'ihi ya, ọ ga-abụ dị ka nke a ruo mgbe ebighị ebi." Dị ka Desi, ndo bụ akaha. Nke a na-eto eto nne ọdụ na ya otu afọ na Hospital nke Santa Maria. A chọpụtara na ọrịa a nkuume ọrịa. "M na-nwa m n'ime ụlọ oge niile. Anyị na-agaghị ebe ọ bụla n'ihi na nke a anwụrụ ọkụ, ma nwa m ka na kọntaktị na oyi baa." "Gịnị mere ndị ọchịchị adịghị eme ihe ọ bụla?" ọ jụrụ "Bụ ọchịchị na-echere ụmụ anyị na-anwụ anwụ n'ihi na-aṅụ sịga?" (BBC)